Notanterahina androany ny fikaonandoham-paritra fankan-kevitra mialoha ny famolavolana ny tetibolam-panjakana 2020 ho an’ny faritra Analamanga - DGFAG
Sambany teo amin’ny tantaram-pirenena no nisy fakan-kevitra niantsona ireo mpisehatra rehetra any amin’ny faritra ivelan’Analamanga ny famolavolana ny tetibolam-panjakana. Teo aloha dia olona vitsivitsy izay teknisianina eny anivon’ny minisitera sy andrim-panjakana, solontenan’ny sehatra tsy miankina sy fiaramonim-pirenena eto an-drenibohitra ihany no manantanteraka izany. Nohitarina tany amin’ny faritra hafa izany tamin’ity indray mitoraka ity, ka androany kosa no tanterahana izany ho an’ny Analamanga raha nahavita ny azy kosa ny tany amin’ny faritra hafa.
Olom-boafidy toy ny Parlemantera, ny Ben’ny tanàna, Olom-boatendry, Teknisianina, Fiarahamonim-pirenena, ireo amin’ny Sehatra tsy miankina no nohenoina tamin’izany tetsy Anosy. “Ny tetibolam-panjakana 2020 dia ho tetibola mitsinjo lavitra. tetibola ahitana taratra ireo fanamby lehibe napetraky ny Filohampirenena, Rajoelina Nirina Andry”, hoy ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Randriamandranto Richard tamin’ny lahateny fanokafana. “Efa niarahantsika nahalala fa tsy misy indrafo intsony izao amin’ny resaka kolikoly (Tolérance zero), tsy hisy intsony ny fitavozavozana, nohamaivanina ireo antana-tohatra tsy maintsy lalovana amin’ny fikarakarana antota-taratasy amin’ny fanjakana”, hoy ihany izy. Manamarika izany ny fitsanganan’ny birao tokana na (guichet unique) eo Antsahavola ho an’ny fikarakarana ny antota-taratasy momba ny fanajariana ny tany.
Raha 30 andro vao vita ny antonta-taratasy ilaina dia efa vita indray andro izany amin’izao fotoana izao. Ho ezahina hanana an’izany Birao tokana izany avokoa ny Minisitera rehetra. “Hamaivanina tahaka izany ihany koa ny fomba hahazoana ny tsenam-baro-panjakana (marchés publics), mba hampiakatra ny fandaniana ao anatin’ny fandaharan’asan’ ny fampiasam-bola-panjakana (PIP). “Na izany aza anefa dia hampiavaka an’ity tetibola 2020 ity ihany koa ny fanitsiana mahery vaika mikasika ny lafiny hetra”, hoy ihany ny Minisitra. “Ilaina ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra-fanjakana sy ny vahoaka mpila raharaha, fa raha hifampiahiahy foana dia tsy hisy zavatra handeha eto amin’ny firenena”hoy hatrany ny ministry ny Toekarena sy ny Vola.
Miainga eny ifotony
Ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo, kosa dia nanamarika tamin’ny lahateny nifandimbiasana fa “amin’izao vao tena hampiharina ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Hatramin’izay dia natao resaka fotsiny izany fa amin’ity dia tena ampiharina ilay izy. Tena miainga avy any ifotony amin’ny alalan’izao fikaonandoha izao ny famolavolana ny tetibolam-panjakana ary mila mitondra ny anjara birikiny ny tsirairay. Izao vao tena fikaonandoha famolavolana tetibola no atao (conference budgétaire)”.
Hivoaka eo daholo ny hevitra rehetra mahatsara na tsy mampety ny zavatra atao. Fotoana izao hamondronana ny hery rehetra entina hampandrosoana an’i Madagasikara”.
Namporisika ny rehetra mba tena hiady hevitra an-kalalahana tsy misy tora-po fa tena fijerena ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny Minisitra roa lahy. Anio no natao teny amin’ny Tranoben’ny Teti-pivoarana teny Anosy ny fikaonandoham-paritra fankan-kevitra mialoha ny famolavolana ny tetibolam-panjakana 2020, ho an’Analamanga ary mbola hitohy amin’ireo faritra hafa izany aorinan’izao.